घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले उपनाम संग ज्ञात एक फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ "वे मैन, रियाजी". हाम्रो रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनल्टर्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने समयको उल्लेखनीय घटनाहरु लाई पूर्ण खाता ल्याउदछ।
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी- विश्लेषण। क्रेडिट गर्न इभेनफ्रेज, डेभरेन्डर र प्रिमियर लिग
हो, सबैले फ्रेजरलाई पुरानो-स्केड स्कस्कि विन्गरमा र लक्ष्य मद्दत विशेषज्ञलाई जान्दछ। तथापि, फुटबलका केही प्रशंसकहरू मात्र एक हातले फ्रेजरको बोयोलाई विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
रयान फ्रेजर 24th फेब्रुअरी 1994 को उनको मातृ, डेबी फ्रेजर र बुबा, ग्रीम फ्रेजर एबरडीन, उत्तरपूर्वी स्कटल्याण्ड, युनाइटेड किंगडम मा भएको थियो। स्कट जसको जाति र जाति जाति हो उहाँका आमाबाबुका लागि मात्र बच्चाको रूपमा जन्मियो।
रयान फ्रेजर एक विनम्र, उच्च-मध्य-मध्य-पारिवारिक पारिवारिक पृष्ठभूमि र खेलकुद घरबाट आउँछ। खेलकुद गृह किन? ... यो किनभने किनभने उनको आमा एक पूर्व 100 मीटर स्प्रेटर थियो जो स्कटल्याण्डले एथलेटिक घटनाहरूको प्रतिनिधित्व गरे।
रयान फ्रेजरले आफ्नो जीवनको प्रारम्भिक वर्ष स्कटल्याण्डको एबरडेनमा आफ्ना आमाबाबुलाई ओमान, मध्य पूर्व देशमा पुर्याउनु अघि उनको पिताले अपतटीय कार्यकर्ताको रुपमा काम गरे, TheSottottSun रिपोर्ट गर्नुहोस्। रयानको बिहे मध्यरातका तेलको काममा लिएर गम्भीर फ्रेजरले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो।
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
फुटबल यात्रा कसरी सुरु भयो:
जबकि रयान फ्रेजर ओमान मा आफ्नो आमाबाबु संग रहन को लागि, उनले एक बल थियो र त्यो सबै गरे सिर्फ यो किक थियो। लिटिलले उनलाई थाहा पाएको थियो कि उनीहरूबाट प्रतिभा निर्माण गरिरहेको थियो। रयानले मात्र उनको बलको बारेमा किक गरेनन्, उसले कसरी सिक्यो कि कसरी स्प्रिन्ट गर्न सक्छ। यो एक परिभाषित क्षण थियो उनको आमाको जीन एक खेलमा प्रकट गर्न थाल्नुभयो न त तिनका आमाबाबुहरू पहिला मन पराउँथे।
समानताबारे बोल्दै, फ्रेजर एक पटक आफ्ना युवाहरूलाई यसो भन्छिन्; "मेरो आमा र पिताले फुटबललाई साँच्चै मनपर्दैन, त्यसैले मलाई थाहा छैन कि मैले कसरी पाएको छु। "सम्भवतः उनीहरूले उनीहरूको छोरालाई खेलमा एक्सेल देखेका थिए जसले तिनीहरूलाई मात्र रुचि राखेन, तर उनीहरूको गृह देश फर्कने अन्तिम निर्णय गरे।
जब रयान फ्रेजरको बुबालाई थाहा भयो कि उनका छोरा फुटबलमा राम्रो थियो, उनले आफ्ना अमीर तेलको काम छोडेर अर्डडेनतिर फर्केपछि नाम छोडे। युवा फ्रेजर 10 थियो जब उनको परिवारले उनलाई फुटबलर बन्ने सपना देखाउन मद्दत गर्ने निर्णय गरे।
यद्यपि गीमले आफ्नो अपमानजनक काम छोड्न र डेबीलाई एथलेटिक्सबाट सेवानिवृत्तिको सामना गर्न कठिन भए तापनि दुवै प्यारा आमाबाबुले उनीहरूको छोराछोरीलाई आफ्नो सपना बाँच्ने निर्णय गरे।
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
रयान फ्रेजरको पारिवारिक निर्णयले आफ्नो लाभांश भुक्तानी गर्यो किनभने स्कटल्यान्डको एबरडेनमा स्थित किन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्।
एक प्रतिष्ठित अकादमी मा भर्ती गरदै एक लामो शट थियो, जो निश्चित रूप देखि भुगतान गरे। जस्तै रयान परिपक्व हुनाले, उनले आफैले अकादमीको साथ जीवनमा राम्रो तरिकाले बसिरहेका थिए। आफ्नो क्यारियरमा शुरुमा, यो धेरै स्पष्ट भयो कि युवा फ्रेजरले आफ्नो आमाको गतिशीलता जीन पाएको थियो। फ्रेजर अलिडेमीमा सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा तेज बच्चा थियो।
रयान फ्रेजर, दाँया, आफ्नो प्रारम्भिक क्यामेरा दिनहरूमा कार्यमा। क्रेडिट EveningExpress CO.UK
एबरडेन एफसीमा जीवन:
रबर्ट फ्रेजर एबर्डेन एफसी संग एक अनुबंध मा हस्ताक्षर गरे पछि 16 को उमेर मा किन्न्न्कन्क अकादमी छोडे। जस्तै रयान फ्रेजर परिपक्व हुनुको साथै, उनले आफैंलाई अकादमी संग जीवनमा राम्रो तरिकाले बसिरहेका थिए। उहाँले बनाउनुभयो अरे अकादमिक उमेर समूहका माध्यमबाट सरेन प्रगति, उनको युवा कोचको भरोसा कमाई।
वर्ष 2010 ले फ्रेजरले एबर्डेड वरिष्ठ टीममा खेल्ने मौका पाएका थिए जहाँ उनी खेलिरहेका थिए। फ्रेजरले 2012-13 स्कटिश प्रीमियर लीग सिजनको शुरुवात भागमा एबरडीन पहिलो टोलीमा तत्काल प्रभाव पारे। यो प्रतिमाले सेप्टेम्बर र अक्टोबर 2012 को लागि यो युवा खेलाडीको महिनाको पुरस्कार कमायो।
रयान फ्रेजर प्रारम्भिक क्यारियर स्टोरी। क्रेडिट दैनिक रेकर्ड.
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि कथा
जब जाँदै थिए
रयान फ्रेजरको असाधारण प्रदर्शनले खेलाडीहरूको विरोधको लागि निरन्तर प्रलोभन र समस्याको स्रोत बनायो। यस स्थितिले एबरडेनको हातमा हात समायो प्रबन्धक Craig Brown had to expressed concerns that opposing teams were targeting Fraser with tough tacklings.
यी चुनौतीहरू पछ्याउँदै, फ्रेजरले दक्षिण अफ्रिकामा दक्षिण अफगानिस्तानको फुटबल जारी राख्नका लागि एक अनुगमन विस्तारलाई अस्वीकार गर्यो। यो निर्णय नकारात्मक रूपमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने एबरडीन फ्यानहरू विरुद्धको थियो।
एसीएफ बर्नमाउथमा कठिन सुरुवात जीवन:
रयानको रोड फेम स्टोन- जब गल्ती ठिक हुन्छ। क्रेडिट कुराकानी SPORT
आफ्नो पहिलो प्रशिक्षण सत्रमा एक गहिरो घुटने चोटले ब्रोममाउथको फ्रेजरको प्रारम्भिक प्रगतिलाई गम्भीर रूपमा सीमित गर्यो। रयानलाई सहन गर्न धेरै कठिन थियो उहाँलाई र उनको दुवै परिवारलाई एबर्डडेनका फ्यानहरूबाट दुर्व्यवहार गरिएको थियो जो आफ्नो प्रस्थान संग खुसी थिएनन्।
अनुभवको बारेमा बोल्दै, फ्रेजर एक पटक यसो भने: "यो मेरो ट्राफिक निर्णय सम्झौता गर्न गाह्रो थियो जुन मैले गइसकेको थियो र सीधा टाढैमा घटेको थियो। दुई हप्ताको चालमा, मैले महसुस गरे जस्तै मैले सही छनौट गरेँ, तर म र मेरो परिवारले यसको लागि चोट लगाइयो "। एक समय रयान फ्रेजर ट्वीट्स र सन्देशहरू पाईन्, जो निकै अपमानजनक थिए र यसको प्रतिक्रिया नगर्ने योग्य थिए।
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
बर्नमाउथमा आफ्नो निराशाजनक सुरुवात र दुरुपयोग गर्ने प्रयास गरिसकेपछि फ्रेजर सधैं विश्वस्त भयो कि उनले दक्षिणलाई यात्रा गर्ने निर्णयमा सही कल गरेका थिए। उहाँले आफ्नो पूर्व प्रशंसकहरू र तिनको परिवारबारे के भन्नु भएको कुरामा ध्यान दिए भन्दा पिचमा कुरा गर्ने निर्णय गर्नुभयो। स्कॉट अनुसार, "यदि केही मानिसहरू अझै पनि सोचेका छन् कि मैले गलत निर्णय गरेको छु, पर्याप्त प्रशस्त। "
चोटको अवधि रयान फ्रेजरका लागि स्याहार प्रतिबिंबको एक क्षण बन्यो जसले एक पटक आफ्नो शब्दमा भन्यो; ...
रयान फ्रेजर रोड चोटबाट रिकभरी गर्न। क्रेडिट एएफसी बर्नमाउथ.
"चोटको साथ, मैले मेरो पहिलो सीजनमा धेरै खेल्न सकेन, तर मैले आफैं भित्रको तथ्य महसुस गरे कि म एक खेलाडीको रूपमा बढ्दै गएको थिएँ। त्यहाँ मेरो खेलमा चीजहरू थिए जुन मैले बुझ्न सकेन। यो त्यो अवधि मैले खेल बाहिर जान्नु भयो। जब सामान गर्न थाल्नुभयो, मैले जबरजस्ती पार्दै, भित्रै आउँदो, जबरजस्ती रह्यो। "
चोट पछि मात्र, रयानले दक्षिण तटमा चिसो लाग्न थाल्नु कुनै समय लागेन। यसले उसलाई देख्यो उनको लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन को लागि धेरै प्रशंसा कमाई। रयान फ्रेजर 2014 / 2015 फुटबल लीग च्याम्पियनशिप जित्नको लागि उनीहरूको टोलीलाई मद्दत गर्न गए।
रयान फ्रेजर रोड प्रसिद्धि स्टोरी
लेखन को समयमा, रयान अब दृढतापूर्वक प्रीमियर लीग मा एडडी ह्वे को अंतर्गत स्थापित गरिएको छ। 2018 / 2019 प्रिमियर लीग सिजनले उनलाई बर्नमाउथका लागि सहायक राजा बनाएको थियो। अझै पनि लेखन को समयमा, फ्रेजर पछि सर्वोत्तम सहायताकर्ता को लागी मानिन्छ ईडन हजर्ड र ईसाई एरिक्सन.
रयान फ्रेजर लक्ष्य सहायता रेकर्ड
आज, संसारले देखाएको छ कि एक साहसी र धेरै आलोचनात्मक निर्णयले उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो र उनीहरूको क्लबको भाग्यलाई पनि चमत्कार गर्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
रयान फ्रेजर गर्लफ्रेंड वा वाग को हो?
रयान फ्रेजरको प्रसिद्धिको उदयसँग, सबैको होंठमा प्रश्न ...रयान फ्रेजरको प्रेमिका वा डब्ल्यूएच को हो?. आफ्नो उचाई बिर्सनुहोस्, त्यहाँ कुनै तथ्य यो अस्वीकार छैन कि रयान फ्रेजरसँग प्रिय गुणहरू छन्, त्यो सुन्दर दृश्यको साथ जसलाई यकीन छ कि उनको केटीहरु लाई दाखिल दाख बनाउँछ।
तथापि, धेरै अनलाइन रिपोर्टहरूको अनुसार, यो देखिन्छ कि रयान फ्रेजर अझै पनि लेखन को लागी एक्लो देखिन्छ। यद्यपि, हामी अनुमान गर्दैछौं कि उनी एक सम्बन्धमा हुन सक्छ तर यो क्षणको लागि कम्तिमा सार्वजनिक बनाउन चाहँदैनन्।
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
रयान फ्रेजरको व्यक्तिगत जीवन जान्नको लागी तपाईंलाई तिनको पूर्ण चित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। फुटबलबाट रयान फ्रेजर एक धेरै सामान्य र विनम्र मध्य-जीवन जीवन बिताउँछ।
रयान फ्रेजर व्यक्तिगत जीवन तथ्य
अधिक त, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मा, रयान फ्रेजर एक परिचय को एक सा छ। उनले आफ्नो खेलमा दृढतापूर्वक स्पेसलाइट राख्न मन पराउँछन् र यसैले, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई सार्वजनिक प्लेटफर्ममा छलफल गर्नबाट बचाउँछ। यसले मिडियाको लागि उसलाई धेरै व्याख्या गर्न कठिन छ।
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- पारिवारिक जीवन तथ्य
त्यो फुटबलमा उपस्थित हुनुभन्दा पहिले, रयान फेजर परिवारले $ 100,000 कमाउन अमीर धनी थियो (तेल मजदुर औसत वार्षिक वेतन) एक वर्ष उनको माम को लागि खेल सेवानिवृत्ति लाभ संग। यद्यपि, यस लेखमा पहिले, यो प्रकट भएन रयान फ्रेजरको परिवारको हरेक सदस्यले खेलबाट खेललाई माया गरेको थियो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… फ्रेजरको माम्बी एकपटक ओलम्पिकमा दौडिरहेका थिए, तर त्यसपछि उनको घुटनी चोट भयो जसले त्यसको क्यारियर समाप्त गर्यो। डेबीबीले एथलेटिक्सबाट सेवानिवृत्त भएपछि लामो समयसम्म उनीहरूको दौडमा उनीहरूले एक सुपरस्टार छोरालाई भनेका थिए। उनको बारेमा बोल्दै, रयानले एक पटक भन्यो: ...
"मेरो आमा मेरो भन्दा छिटो छ - धेरै छिटो! उनी उस समय घाइते भएका थिए, तर हामी सँगै सडकमा स्प्रिन्ट छ र उनीहरूले मलाई लगभग चोरी गर्थे। त्यो मेरो भन्दा सानो छ तर त्यो छिटो छ! "
आफ्नो आमा धेरै धेरै उकालो दिन बावजूद, फ्रेजर सधैं आफ्नो बुबा को लागि आभारी हुनेछ जो आफ्नो कैरियर को लागि तेल को काम भुक्तानी आफ्नो पैसा छोडने को त्यो ठूलो बलिदान गरे। सबै ग्रीम फ्रेजर चाहिएको थियो उनको पुत्र फुटबलको आनन्द उठाउन र उनको सपनाको खर्चमा ध्यान केन्द्रित गर्न थियो।
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- LifeStyle
फ्रेजर लेखन को समयमा को अनुसार £ 16.20m को बजार मूल्य छ स्थानान्तरणमार्केट रिपोर्ट गर्नुहोस्। यद्यपि, यस तथ्यले एकमा पारित गर्दैन लाहिश जीवन शैली सजिलै संग फ्याक्ट कार, ठूलो हवेली, केटीहरु र बज को मुट्ठी देखि ध्यान दिए। रयान फ्रेजर आफ्नो मोनिज गोल्फ सदस्यता खर्च गर्न चाहानुहुन्छ।
रयान फ्रेजर लाइफस्टीले तथ्यहरू
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
रयान फ्रेजर एकपटक पिज्जा र आइस-क्रीममा लत भएको थियो, सम्भवतः उनीहरूको पहिलेको चोटका समस्याहरूको कारण। एडी ह्वेले एक पटक उनलाई पिज्जा र आइसक्र्याम्स बानीहरू लाई धेरै स्वस्थ आहार योजना अपनाउनको लागि स्वीकारे। एक स्वस्थ आहारले खानेकुरालाई बलियो बनाइराख्ने र नराम्रो उपचारले प्रायः रक्षकहरूलाई पराजित गर्यो।
उनको पहिलो टिभी शो
रयान फ्रेजर धेरै कम फुटबलरहरू छन् जुन टिभी शो उपस्थितिको भाग भएको छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?।.. उनी खेलकुदमा एक अभिनेता थिए "5 मा फुटबल: च्याम्पियनशिप"।
उहाँको ऊँचाईको बारेमा:
रयान फ्रेजर - प्रिमियर लीगमा सबैभन्दा कम खेलाडी। डेलीमेल को क्रेडिट
केवल 5ft 4IN मा स्थायी, फ्रिज हाल अंग्रेजी शीर्ष-फ्लाइटमा लेखनको समयमा सबैभन्दा सानो खेलाडी हो। उचाइको बावजुद, साना ताराले प्रमुख लेगमा ठूलो प्रगति गरेको छ।
रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- भिडियो सारांश
कृपया तल खोज्नुहोस्, यो प्रोफाइलको लागि हाम्रो YouTube भिडियो सारांश। दयालु भ्रमण गर्नुहोस् र हाम्रो सदस्यता लिनुहोस् YouTube च्यानल थप भिडियोहरूको लागि।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो रयान फ्रेजर बचपन स्टोरी प्लस अनटल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
हैरी केन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जोनाोज Shelvey बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य